Bit By Bit - Ethics - eme
[ N'ịgụ ụka megide nnwale ahụ nke Emotional Contagion, Kleinsman and Buckley (2015) dere, sị:
"Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ihe ize ndụ maka nnwale Facebook ahụ dị ala ma ọ bụrụgodị na, na ịchọta, a ga-esi na ya pụta ọ bara uru, enwere ụkpụrụ dị mkpa ebe a ga-akwado. N'otu ụzọ ahụ ohi na-ezu ohi n'agbanyeghị ihe ọnụahịa dị, ya mere, anyị niile nwere ikike ka a ghara ịnwale anyị n'amaghị ihe ọmụma na nkwenye anyị, n'agbanyeghị ụdị nchọpụta a. "
Kedu n'ime usoro okwu ọma abụọ a tụlere na nke a na-akọwa ma ọ bụ deontology-ọ bụ arụmụka a kachasị emetụta?
Ugbu a, were ya na ị chọrọ ịlụ ọgụ megide ọnọdụ a. Kedu ka ị ga - esi arụ ụka ahụ maka onye nta akụkọ maka New York Times ?
Kedụ, ma ọ bụrụ na ọ bụla, esemokwu gị dị iche ma ọ bụrụ na gị na onye ọrụ gị na-akparịta ụka a?
[ ] Maddock, Mason, and Starbird (2015) tụlee ajụjụ ma ndị nyocha kwesịrị iji tweets ndị ehichapụla. Gụọ akwụkwọ ha iji mụta banyere ndabere.
Nyochaa mkpebi a site na nlebara anya.
Tụlee kpọmkwem otu mkpebi ahụ site n'aka onye na-achọ ọdịmma.
Kedu nke ị na-achọta ihe doro anya n'okwu a?
[ N'akwụkwọ dị na nkọwa gbasara omume ọma, Humphreys (2015) nyere echiche nyocha a na-esonụ iji mee ka a mata ihe ịma aka ndị metụtara iwu nke ememe na-enweghị nkwenye nke ndị ọ bụla nwere nsogbu na nke na-emerụ ụfọdụ ma na-enyere ndị ọzọ aka.
"Otu ndị na-eme nchọpụta na-akpọ onye na-eme nchọpụta otu ìgwè nke òtù obodo ndị chọrọ ịchọta ma ịtọye ọkụ ọkụ n'okporo ámá ga-ebelata mpụ ime ihe ike. Na nyocha a, isiokwu ndị ahụ bụ ndị omempụ: ịchọ nkwenye nke ndị omempụ nwere ike imebi nchọpụta ahụ, ọ ga-abụkwa na ọ gaghị abịa (mmebi iwu maka ndị mmadụ); ọ ga-abụ na ndị omempụ ga-akwụ ụgwọ nke nchọpụta n'enweghị uru (imebi ikpe ziri ezi); na enwere nkwekọrịta banyere uru nke nnyocha-ma ọ bụrụ na ọ dị irè, ndị omempụ karịsịa agaghị aba ya uru (ịmepụta ihe isi ike iji nyochaa ihu ọma) ... Ihe ndị pụrụ iche dị na ebe a abụghị naanị maka ihe ndị a. N'ebe a, e nwekwara ihe ize ndụ ndị na-enweta na ndị na-abụghị ndị na-achị, ma ọ bụrụ na ndị omempụ dịka ọmụmaatụ na-akwụghachite megide òtù ndị na-etinye oriọna. Nzukọ ahụ nwere ike ịma ihe ndị a dị ize ndụ ma dị njikere ịnagide ha n'ihi na ha na-atụkwasị obi na-atụghị anya na ndị na-eme nchọpụta si n'aka mahadum bara ọgaranya bụ ndị na-akwali na ha ga-ebipụta. "
Dee aha email na otu obodo na-enye gị nyocha gbasara omume nke nnwale ahụ dịka e mere? Ị ga-enyere ha aka ime nnwale ahụ dị ka e nyere ha? Olee ihe nwere ike imetụta mkpebi gị?
Enwere mgbanwe ụfọdụ nwere ike ịmezi nyocha gị banyere ụkpụrụ omume nke imepụta nchọpụta a.
[ N'afọ iri asaa na asaa na iri isii na iri isii, mmadụ iri isii na-arụ ọrụ n'ime ime ụlọ mposi na mahadum na midwestern nke United States (ndị nchọpụta anaghị akpọ mahadum) (Middlemist, Knowles, and Matter 1976) . Ndị nnyocha ahụ nwere mmasị na otú ndị mmadụ si meghachi omume megide mmebi nke ohere nke onwe ha, nke Sommer (1969) kọwara dị ka "ebe nwere akụkụ ndị a na-adịghị ahụ anya gburugburu ozu mmadụ nke ndị omempụ nwere ike ghara ịbịa." More kpọmkwem, ndị nchọpụta ahọrọ ịmụọ otú otu urination ndị mmadụ na-emetụta site na ọnụnọ ndị ọzọ dị nso. Mgbe ha na-eduzi ọmụmụ ihe na-eme nke ọma, ndị na-eme nchọpụta mere nchọpụta ubi. A manyere ndị na-eso ụzọ iji aka ekpe kachasị aka n'ime ime ụlọ ịwụ atọ nke atọ (ndị na-eme nnyocha akọwaghị kpọmkwem otú e si mee nke a). Ọzọ, e kenyere ndị na-arụ ọrụ na otu n'ime ọkwa atọ nke ntụgharị uche. Nye ụfọdụ ndị ikom, ndị na-emekọ ihe ọnụ na-eji ụzọ ndụ ndị na-eme ihe ngwa ngwa n'akụkụ ha; n'ihi na ụfọdụ ndị ikom, ndị na-ejikọta ọnụ na-eji oghere ntụrụndụ pụọ n'ebe ha nọ; na maka ụfọdụ ndị nwoke, ọ dịghị onye ọ bụla na-abanye n'ime ịsa ahụ. Ndị na-eme nchọpụta tụnyere ngbanwe ha na - agbanwe oge-oge na nkwụsi ike-site n'ịnọgide onye nyocha n'ime ụlọ mposi dị n'akụkụ urinal onye ahụ. Nke a bụ otú ndị nchọpụta si kọwaa usoro nhazi ahụ:
"Otu onye na - ekiri ihe a na - edebe n'ụlọ mposi ozugbo na - agbakwasị ụkwụ n'arịrịọ ndị ahụ. N'oge ule pilot nke usoro ndị a, ọ bịara doo anya na enweghi ike iji ihe ndekọ ederede gosipụta mmalite na ịkwụsị [urination] ... Kama nke ahụ, eji ihe ngosi anya. Onye na-ekiri ihe ahụ na-eji prism na-ekpuchi ya na nchịkọta akwụkwọ ndị dina n'elu ala ụlọ mposi. Otu oghere nke dị sentimita 11 (28 cm) n'etiti ala na mgbidi nke ụlọ mposi na-enye echiche, site na periscope, nke eriri ọkụ nke onye ọrụ ma mee ka nlele anya nyocha nke mmiri mmamịrị. Otú ọ dị, onye na-ekiri ihe na-emenụ enweghị ike ịhụ ihu ihu ya. Onye na-ekiri ihe nkiri ahụ malitere nche nche abụọ ma ọ bụrụ na otu isiokwu agafee na nke ahụ ọkụ, kwụsịrị otu mgbe urination malitere, ma kwụsịrị onye ọzọ mgbe a kwụsịchara urination. "
Ndị nchọpụta ahụ chọpụtara na ọpụpụ anụ ahụ dị ntakịrị na-eduga n'ịgba oge nke mmalite ma belata nkwụsi ike (onu 6.7).
Ị chere na nnwale a merụrụ ndị sonyere ya?
Ị chere na ndị na-eme nnyocha kwesịrị ikwewo nnwale a?
Mgbanwe ndị dịgasị, ma ọ bụrụ na ọ bụla, ị ga-atụ aro iji melite nkwụnye ego?
Ihe odide nke 6.7: Ihe si n'aka Middlemist, Knowles, and Matter (1976) . E kenyere ndị ikom abanye n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ n'otu n'ime ọnọdụ atọ: nso dị anya (a na-etinye otu na-etinye aka na ngwa ngwa), na-adịghị anya (a na-ewepụ otu onye na-ewepụ ya), ma ọ bụ na-achịkwa (ọ bụghị onye ọzọ). Onye na-ekiri ihe a na-edebe ihe na mposi na-eji ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ na-eme ihe na oge nkwụsị na nkwụsị nke urination. Akwụsịghị ntụpọ ezighi ezi na atụmatụ ezughị. E si n'aka Middlemist, Knowles, and Matter (1976) , nke 1.
[ , N'August 2006, ihe dị ka ụbọchị 10 tupu ntuli aka mbụ ahụ, mmadụ 20,000 bi na Michigan natara ozi nzipu ozi nke gosipụtara omume ịgba nhoputa ha na omume ịgba akwụkwọ nke ndị agbata obi ha (nọmba 6.8). (Dịka a tụlere n'isiokwu a, na United States, ọchịchị ndị ọchịchị na-edekọ ihe gbasara ndị nhoputa aka na ntuli aka ọ bụla na ozi a dị maka ọha na eze.) Otu akwụkwọ ozi na-eme ka ọnụọgụ ndị ọzọ gbanwee ihe dị ka otu pasent, mana nke a na-arịwanye elu site na pasent 8.1, ihe kachasị emetụta ya ruo n'oge ahụ (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Mmetụta dị nnọọ ukwuu nke na onye ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị aha ya bụ Hal Malchow nyere Donald Green $ 100,000 ka ọ ghara ịkọpụta ihe nrite ahụ (ma eleghị anya na Malchow nwere ike iji ozi a n'onwe ya) (Issenberg 2012, p 304) . Ma, Alan Gerber, Donald Green, na Christopher Larimer bipụtara akwụkwọ ahụ n'afọ 2008 na American Political Science Review .
Mgbe ị jiri nlezianya nyochaa mailer na ihe 6.8 ị nwere ike chọpụta na aha ndị na-eme nchọpụta apụtaghị na ya. Kama nke ahụ, adreesị nloghachi bụ Iji Nlekọta Ọchịchị Na-eme Ihe. Na nkwenye maka akwukwo ahụ, ndị edemede na-akọwa, sị: "ekele dị ukwuu na-aga Mark Grebner nke Practical Political Consulting, bụ onye haziri ma na-elekọta usoro mpempe akwụkwọ a mụrụ na ebe a."
Nyochaa iji ọgwụgwọ a mee ihe gbasara usoro ụkpụrụ omume anọ dị na isi nke a.
Nyochaa usoro ọgwụgwọ ahụ gbasara echiche nke iguzosi ike n'ezi ihe.
Kedu mgbanwe, ọ bụrụ na ọ bụla, ị ga-akwado ka nnwale a?
Ọ ga-emetụta azịza gị nye ajụjụ dị n'elu ma ọ bụrụ na Mark Grebner ezipụrịrị ozi ndị dị otú a n'oge a? N'ikwu ya n'ozuzu, olee ot'u ndi oru nyocha kwesiri isi chee echiche banyere inyocha atumatu di iche iche nke ndi oru?
Were ya na ị na-ekpebi ịgbalị ịnweta nkwenye sitere n'aka ndị nọ n'ìgwè ahụgwọ kama ọ bụghị ndị na-achịkwa. Mmetụta dị aṅaa ka mkpebi a ga-enwe na ike gị ịghọta ihe kpatara ọdịiche dị na ọnụ ọgụgụ nhoputa ọnụ n'etiti ndị ọrụ ọgwụgwọ na ndị isi?
Dee ihe odide gbasara iwu nke nwere ike ịpụta na akwụkwọ a mgbe e bipụtara ya.
Onu ogugu nke 6.8: Mailer onye agbata obi si Gerber, Green, and Larimer (2008) . Nke a na-azụlite ọnụ ọgụgụ ndị na-atụgharị ọnụ site na pasent 8.1, bụ mmetụta kasị ukwuu e nweworo maka otu mailer. Edeghachiri ya site n'aka Gerber, Green, and Larimer (2008) , ngwa ngwa A.
[ ] Nke a na-ewuli na ajụjụ mbụ. Ozugbo a zipụrụ ndị a na-ezigara mmadụ 20,000 (nọmba 6.8), tinyere 60,000 ndị ọzọ na-adịghị anabata ndị na-azụ ahịa, e nwere ihe nkwado site n'aka ndị na-eso ya. N'eziokwu, Issenberg (2012) (p. 198) na-akọ na "Grebner [onye ntụzi na-ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ahụ maka ọdịmma na-arụ ọrụ] enweghị ike ịkọ mmadụ ole na ole nwere nsogbu ime mkpesa site na ekwentị, n'ihi na igwe nzaghachi ọrụ ya jupụtara ngwa ngwa nke ahụ ndị na-akpọ òkù enweghị ike ịhapụ ozi. "N'eziokwu, Grebner kwuru na azụ azụ nwere ike ịbụ ọbụna buru ibu ma ọ bụrụ na ha emetụwo ọgwụ ahụ. Ọ gwara Alan Gerber, otu n'ime ndị nchọpụta ahụ, "Alan ma ọ bụrụ na anyị ejirila narị dọla ise na ise ma kpuchie ala dum anyị na gị ga-ebi Salman Rushdie." (Issenberg 2012, 200)
Ozi a ọ na-agbanwe azịza gị maka ajụjụ mbụ?
Kedu usoro ị ga-esi na-eme mkpebi mgbe ị na-amaghị ihe ị ga-akwado maka nchọpụta yiri nke a n'ọdịnihu?
[ , N'ihe omume, ọtụtụ arụmụka banyere arụmụka bụ gbasara ọmụmụ ebe ndị nchọpụta enweghị ezigbo nkwenye nke ndị na-eme (dịka akwụkwọ atọ a kọwara na isi nke a). Otú ọ dị, arụmụka okike nwere ike ibilite maka ọmụmụ ihe nke nwere nkwenye nkwenye. Chepụta ọmụmụ ihe atụ ebe ị ga-enwe nkwenye nkwenye nke ndị na-eso, ma nke ị ka na-eche na ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma. (Ntughari: Ọ bụrụ na ị na-agba mgba, ị nwere ike ịnwa ịgụ Emanuel, Wendler, and Grady (2000) .)
[ , ] Ndị na-eme nchọpụta na-agbakarị ọgụ iji kọwaa echiche ha na-echebara onwe ha na ọha na eze echiche. Mgbe a chọpụtachara na Jason Kauffman, onye ndú nke ndị na-eme nchọpụta ahụ, kwurughachiri na Ọchịchị, Ties, na Time, kwuru okwu ole na ole banyere omume ọma nke ọrụ ahụ. Na-agụ Zimmer (2010) wee deeghachi okwu nke Kauffman site na iji ụkpụrụ na ụkpụrụ omume ndị akọwapụtara na isi nke a.
[ ] Banksy bụ otu n'ime ndị na-eme ihe nkiri a na-akwanyere ùgwù n'oge a na United Kingdom, a makwaara maka graffiti n'okporo ámá (nọmba 6.9). Otú ọ dị, ọ bụ ihe omimi. Banksy nwere mkpokọta nkeonwe onwe ya, ya mere o nwere ike ime ka ọha mara ya ma ọ bụrụ na ọ chọrọ, ma ọ họrọghị. N'afọ 2008, akwụkwọ akụkọ Daily Mail bipụtara otu isiokwu na-azọrọ na ọ bụ aha aha Banksy. Ekem, ke 2016, Michelle Hauge, Mark Stevenson, D. Kim Rossmo na Steven C. Le Comber (2016) nwara iji nyochaa nkwupụta a site na iji usoro Dirichlet na-agbakọta usoro mgbasa ozi. Karịsịa, ha chịkọtara ebe ndị a na-ahụ maka ebe a na-edebe akwụkwọ na banksy na Bristol na London. Ọzọ, site na nyocha site na akwụkwọ akụkọ ochie na akwụkwọ ndekọ ntuli aka ọha na eze, ha hụrụ aha onye ọ bụla aha, nwunye ya, na egwuregwu football ya (ya bụ, bọl). Onye edemede ahụ chịkọtara nchọpụta nke akwụkwọ ha dị ka ndị a:
"Enweghi ihe ndi ozo di egwu 'choro ichoputa, o siri ike ikwuputa okwu banyere ama Banksy n'agbata nchoputa nke a gosiputara ebe a, karia ikwu uzo nke geoprofiles na Bristol na London tinyere asusu ndi a mara na [aha e degharịrị]. "
Na-eso Metcalf and Crawford (2016) , ndị na-atụle okwu a n'ụzọ zuru ezu, ekpebiri m ịghara itinye aha onye ahụ mgbe ọ na-atụle ọmụmụ ihe a.
Nyochaa ọmụmụ ihe a site na iji ụkpụrụ na ụkpụrụ omume dị na isi nke a.
Ị gaara eme nnyocha a?
Ndị edemede kwadoro ọmụmụ a na nkịtị nke akwukwo ha nke nwere ahịrịokwu a: "N'okwu ndị ọzọ, nsonaazụ ndị a na-akwado ndụmọdụ ndị gara aga na a pụrụ iji nyocha nke obere ọrụ metụtara iyi ọha egwu (dịka, graffiti) iji nyere aka ịchọta ebe ndị na-eyi ọha egwu n'ihu eme ihe na-adọrọ mmasị, na-enyekwa ihe atụ na-adọrọ mmasị nke ngwa ngwa ahụ maka nsogbu dị mgbagwoju anya, nsogbu ụwa. "Nke a ọ gbanwere echiche gị gbasara akwụkwọ akụkọ ahụ? Edieke edide ntre, didie?
Ndị dere gụnyere akwụkwọ akụkọ na-esonụ na njedebe nke akwụkwọ akụkọ ha: "Ndị na-ede akwụkwọ maara, na-akwanyere ùgwù, aha nzuzo nke aha [ya na ndị ikwu ya] wee si otú a jiri data na mpaghara ọha. Anyị ama ụma wepụtara kpọmkwem adreesị. "Nke a ọ gbanwere echiche gị banyere akwụkwọ akụkọ ahụ? Edieke edide ntre, didie? Ì chere na dichotomy ọha na eze / nke onwe ha nwere ezi uche n'okwu a?
Onyonyo 6.9: Foto nke Nchọgharị Nledo site na Banksy na Cheltenham, England site n'aka Kathryn Yengel, 2014. Isi: Kathryn Yengel / Flickr .
[ ] Metcalf (2016) eme ka arụmụka ahụ "na-enwe ọha na eze nwere dataseti nke nwere data nzuzo bụ otu n'ime ihe kasị amasị ndị na-eme nchọpụta na ndị kasị dị ize ndụ na-achịkwa."
Nso idi uwụtn̄kpọ iba emi ẹn̄wamde ikọ emi?
N'okwu a, Metcalf na-ekwukwa na ọ bụ anachronistic iji chee na "ihe ọhụụ ọ bụla emetụlarị site na dataset ọha na eze." Nye otu ihe atụ nke ebe a nwere ike ịbụ ikpe ahụ.
[ , ] N'isiakwụkwọ a, enyewo m iwu isi mkpịsị aka na data niile nwere ike ịmepụta na data niile nwere ike ịdị nro. okpokoro 6.5 na-enye ndepụta nke ihe omuma nke data ndi ozo enweghi nghota ozi nke aka ha ma enwere ike jikota ha na ndi mmadu.
Chọta abụọ n'ime ihe atụ ndị a ma kọwaa otú nbido ịchọtaghachi na abụọ ahụ nwere usoro yiri nke ahụ.
Maka otu n'ime ihe atụ abụọ a na mpaghara (a), kọwaa otú data nwere ike isi kọwaa ozi nchịkwa banyere ndị na dataset.
Ugbu a, họrọ dataset nke atọ site na tebụl. Dee onye email ozi na ịtọhapụ ya. Kọwaara ha otú data a nwere ike isi bụrụ nke a ga-amata ma bụrụ nke nwere ike ịdị nro.
Isiokwu nke 6.5: Ihe Nlereanya nke Ọdịmma Ndị Nchịkọta Mmadụ nke Na-adịghị Enwe Ọhụụ Ọ bụla Na-achọpụta Ozi Ma A Pụrụ Ịbụ Njikọ Nye Ndị Mmadụ Doro Anya
Akwụkwọ ndekọ mkpuchi ahụike Sweeney (2002)
Nkwekọrịta azụmahịa azụmahịa Montjoye et al. (2015)
Dataflix nkiri data fim Narayanan and Shmatikov (2008)
Oku oku meta-data Mayer, Mutchler, and Mitchell (2016)
Ndekọ data ndekọ Barbaro and Zeller (2006)
Omuma, nhazi, na mmekọrịta gbasara mmadụ Zimmer (2010)
[ ] Ịba onwe gị na akpụkpọ ụkwụ ọ bụla gụnyere ndị sonyere gị na ọha na eze, ọ bụghị naanị ndị ọgbọ gị. A na-akọwa ọdịiche a n'ihe banyere Ụlọ Ọgwụ Ọjọọ nke Ndị Juu (Katz, Capron, and Glass 1972, chap. 1; Lerner 2004; Arras 2008) .
Chester M. Southam bụ ọkachamara na onye na-eme nnyocha na Sloan-Kettering Institute for Cancer Research na Professor Professor of Medicine na Cornell University Medical College. Na July 16, 1963, Southam na ndị ọrụ ibe abụọ gbara mkpụrụ ndụ cancer n'ime mkpụrụ nke mmadụ 22 na-arịa ọrịa debilitated na Ụlọ Ọgwụ Na-ahụ Maka Ọrịa Na-ahụ Maka Ndị Juu na New York. Ihe ndị a bụ akụkụ nke nchọpụta nke Southam iji ghọta usoro ọrịa nke ndị ọrịa cancer. Na nchọpụta mbụ, Southam achọpụtala na ndị ọrụ afọ ofufo ahụike nwere ike ịjụ sel cancer n'ime ihe dị ka izu anọ ma ọ bụ isii, ebe o were ndị ọrịa nwere ọrịa cancer ogologo oge. Southam na-eche ma nzaghachi oge na ndị ọrịa cancer bụ n'ihi na ha nwere ọrịa cancer ma ọ bụ n'ihi na ha merela okenye ma na-emezilarịrị ya. Iji kwurịta ihe ndị a, Southam kpebiri itinye mkpụrụ ndụ cancer n'ime otu ìgwè ndị agadi ma debilitated ma ndị na-enweghị kansa. Mgbe okwu nke ọmụmụ gbasara, kpatara ụfọdụ site na iwepụ nke ndị dọkịta atọ a gwara ka ha bịa, ụfọdụ na-atụle ogige ịta ahụhụ ndị Nazi, ma ndị ọzọ na-adabere na akụkụ nke mkpuchi site na Southam-chọtara nnyocha ahụ n'enweghị ihe ọ bụla. N'ikpeazụ, New York State Board of Regents tụlere ikpe ahụ iji kpebie ma Southam kwesịrị ịnọgide na-eme ọgwụ. Nkwado kwadoro na ya na-eme "omenala kachasị mma nke ọrụ nlekọta ahụ dị mkpa". Ọghachite ya dabeere n'ọtụtụ ọnụahịa, ndị ọkachamara dị iche iche na-akwado ya bụ ndị gbara akaebe maka ya: (1) nchọpụta ya bụ nke dị elu na nkà mmụta sayensị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya; (2) enweghi ihe ize ndụ bara uru nye ndi ozo; ihe a na-ekwu na akụkụ nke afọ iri nke afọ nke afọ iri na ise nke Southam nwere ihe karịrị narị isii; (3) ọkwa nke nkwupụta ga-agbanwe dịka ọkwa nke onye nchọpụta si dị; (4) nchọpụta ahụ kwekọrọ n'ụkpụrụ ịgwọ ọrịa n'oge ahụ. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ Regent hụrụ na Southam kwenyere na ọ bụ aghụghọ, aghụghọ, na omume na-ezighị ezi, ma kwụsịrị ikike ikikere ya maka otu afọ. N'agbanyeghị nke ahụ, nanị afọ ole na ole mgbe e mesịrị, a họpụtara Southam onye isi oche nke American Association of Cancer Researchers.
Tụlee ihe ọmụmụ Southam na-eji ụkpụrụ anọ dị na isi nke a.
O yiri ka Southam na-ele ndị ọrụ ibe ya anya ma jiri ezi atụ anya ka ha ga-esi meghachi omume n'ọrụ ya; n'eziokwu, otutu n'ime ha gbara akaebe n'aha ya. Ma o nweghi ike ma ọ bụ na ọ chọghị ịghọta otú nnyocha ya nwere ike isi mee ka ndị mmadụ nwee nsogbu. Kedu ọrụ ị chere echiche ọha na eze-nke nwere ike iche na echiche nke ndị sonyere ma ọ bụ ndị ọgbọ-kwesịrị inwe na ụkpụrụ nyocha? Gịnị ga - eme ma ọ bụrụ na echiche ndị na - ewu ewu na echiche ndị ọgbọ dị iche?
[ ] N'akwụkwọ a kpọrọ "Crowdseeding na Eastern Congo: Iji ekwentị mkpokọta iji chịkọta ihe na-akpata ọgba aghara Ihe Data na Real Time", Van der Windt na Humphreys (2016) kọwaa usoro nchịkọta data weghaara (lee isi 5) nke ha kere na Eastern Congo. Kọwaa otú ndị na-eme nnyocha si mesoo enweghị mgbagwoju anya banyere ihe nwere ike imekpa ndị na-eso ụzọ.
[ N'October 2014, ndị ọkà mmụta sayensị atọ zipụrụ ndị nzaghachi na 102,780 ndị nhoputa aka na Montana-ihe dị ka pasent 15 nke ndị ntinye aka n'akwụkwọ (Willis 2014) -bụ akụkụ nke nnwale iji tụọ ma ndị nnochite anya a na-enyekwu ozi ọ ga-akawanye ike . Ndị a na-akpọ "Voten Information Guide" 2014 "Montana General Voters Information Guide" -eme ka ndị ikpe na-ekpe ikpe na-ekpe ikpe Montana, na nke bụ nhoputa ndi na-abụghị ndị na-achọghị, na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-enweghị ncheta, gụnyere Barack Obama na Mitt Romney. Mailer ahụ gụnyekwara mmepụta nke nnukwu akara nke State nke Montana (nọmba 6.10).
Ndị na-ere ahịa na-eme mkpesa site n'aka Montana ndị omeiwu, ha mekwara Linda McCulloch, odeakwụkwọ State nke Montana, iji tinye ọchịchị na steeti State. Ụlọ akwụkwọ mahadum ndị na-eme nchọpụta-Dartmouth na Stanford-zigara onye ọ bụla natara onye ozi ahụ akwụkwọ ozi, rịọ mgbaghara maka mgbagwoju anya ọ bụla ma mee ka o doo anya na onye ozi ahụ "adịghị etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụla, nwa akwukwo ma ọ bụ nzukọ, ọ bụghịkwa na-emetụta agbụrụ ọ bụla. "Akwụkwọ ozi ahụ kwukwara na ogo" dabere na ozi ọha mmadụ banyere ndị nyere onyinye ọ bụla "(nọmba 6.11).
Na May 2015, Kọmitii na-ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na steeti Montana, Jonathan Motl, kpebisiri ike na ndị nchọpụta ahụ mebiri iwu Montana: "Kọmitii ahụ kpebiri na e nwere ihe zuru oke iji gosipụta na Stanford, Dartmouth na / ma ọ bụ ndị na-eme nchọpụta mebiri Montana eme iwu ndị chọrọ ịdenye aha, ịkọ na ịkọ ọkwa nke mmefu ego onwe ha "(Ịchọpụta Number nke 3 na Motl (2015) ). Kọmitii ahụ kwukwara na onye isi obodo na-enyocha ma iji ikikere nke Great Seal nke Montana mebiri iwu obodo Montana (Motl 2015) .
Stanford na Dartmouth ekwenyeghi na ikpe nke Motl. Otu onye na-ekwuchite ọnụ na Stanford aha ya bụ Lisa Lapin kwuru na "Stanford ... ekwenyeghi na iwu ọ bụla metụtara ntuli aka" nakwa na nzipu ozi ahụ "enweghị nkwado ọ bụla na-akwado ma ọ bụ na-emegide onye ọ bụla." O kwuru na onye ozi ahụ kwuru hoo haa na " anaghị akwado onye ọ bụla ma ọ bụ onye ọ bụla " (Richman 2015) .
Nyochaa ọmụmụ ihe a site na iji ụkpụrụ anọ na etiti abụọ akọwapụtara na isi nke a.
N'ịchọrọ na e zigara ndị na-ezigara na ndị na-eme nchọpụta na-emetụta ndị omeiwu (ma na-agbakwunye nke a n'oge na-adịghị anya), n'ọnọdụ ndị dị aṅaa ka ozi nzipu ozi a nwere ike isi gbanwee ihe ga-esi na nhoputa aka ikpe Ụlọikpe Kasị Elu?
N'eziokwu, ndị eziteghị ndị mmadụ ezigara na ndị nhoputa ndi mmadu. Dị ka otu akụkọ nke Jeremy Johnson (ndị ọkà mmụta sayensị na-akwado maka nchọpụta) si kwuo, ndị e zigara "zigara ndị 64,265 ndị ​​na-eme nchọpụta bụ ndị a na-egosi na ha nwere onwe ha na ndị na-etinye aka na Democratic na 39,515 ndị ​​omempụ mara dị ka ndị na-eme mgbanwe na Republican. Ndị nchọpụta ahụ kwadoro ọdịiche dị n'agbata Democratic na Republican nọmba na ha tụrụ anya na ndị mmadụ ga-esiwanye ike n'etiti ndị Democratic voting. "Nke a ọ gbanwere nyocha gị banyere nyocha ọchụchọ ahụ? Edieke edide ntre, didie?
Na nzaghachi nye nchoputa a, ndi nyocha ahu kwuru na ha weputara ntuli aka a n'otu uzo n'ihi na "obughi agburu ikpe enwere ike imegide ndi isi. Dabere na nyocha nke ọkwa ntuli aka mbụ nke 2014 na ihe gbasara ikpe ikpe ikpe Montana gara aga, ndị nchọpụta ahụ kpebiri na nchọpụta ọmụmụ nke e mere agaghị agbanwe ihe ga-esi na ya pụta " (Motl 2015) . Nke a ọ gbanwere nyocha gị banyere nyocha ahụ? Edieke edide ntre, didie?
N'eziokwu, nhoputa ndi ochichi abughi ndi nso (okpokoro 6.6). Nke a ọ gbanwere nyocha gị banyere nyocha ahụ? Edieke edide ntre, didie?
Ọ na-apụta na otu onye na-eme nchọpụta natara Dartmouth IRB nnyocha, ma nkọwa dị iche na nke nke ọmụmụ Montana n'ezie. A naghị edozi onye ozi ahụ na Montana na IRB. Ọ bụghị Stanford IRB ka e nyefere akwụkwọ ahụ. Nke a ọ gbanwere nyocha gị banyere nyocha ahụ? Edieke edide ntre, didie?
O kwukwara na ndị nyocha ahụ ezigara ndị 143,000 votu na California na 66,000 na New Hampshire ụdị ọrụ ntuli aka ahụ. Dika m maara, enweghi mkpesa ndi mmadu mere ihe ndia dika ndi mmadu. Nke a ọ gbanwere nyocha gị banyere nyocha ahụ? Edieke edide ntre, didie?
Kedu, ma ọ bụrụ na ọ bụla, ị gaara eme ihe dị iche ma ọ bụrụ na ị bụ ndị nchọpụta bụ isi? Kedu ka ị ga-esi mepụta ọmụmụ ihe ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịgagharị ma ọ bụrụ na ozi ndị ọzọ na-eme ka ndị ntinye aka na ntuli aka na agbụrụ ndị na-abụghị nke ndị ọzọ?
Isiokwu 6.6: Ihe si na Amụma nke ikpe na-ekpe ikpe na United States na Montana 2014 (Isi Iyi: Webpage of Montana Secretary of State)
A natara ụta
Ikpe nke Ụlọikpe Kasị Elu # 1
Ikpe Ikpe Kasị Elu nke Abụọ # 2
Onu ogugu 6.10: Mailer zigara ndi oru nchoputa ndi isi ochichi di iche iche na nde mmadu 102,780 na Montana dika ihe omuma iji tuta ma ndi ozo a na-enye ndi ozo enwere ike itoputa. Onu ogugu n 'onu ogugu a bu ihe di ka pasent 15 nke ndi nhoputa ndi ruru eru na steeti (Willis 2014) . Edeghachiri na Motl (2015) .
Onu ogugu nke 6.11: Akwukwo ozi nke ezitere ndi nhoputa ndi ozo di nde 102,780 na Montana ndi natara onye nasi ka egosiputara na onodu 6.10. Akwụkwọ ozi ahụ bụ ndị isi nke Dartmouth na Stanford, ndị mahadum ndị ọrụ ndị nchọpụta zigara onye ozi ahụ. Edeghachiri na Motl (2015) .
[ On May 8, 2016, ndị nchọpụta abụọ-Emil Kirkegaard na Julius Bjerrekaer wepụrụ ihe ọmụma site na ịntanetị site na OkCupid ma wepụta ihe dataset nke ihe dị ka mmadụ 70,000, gụnyere mgbanwe dịka aha njirimara, afọ, okike, ọnọdụ, echiche ndị metụtara okpukpe. , echiche ndị na-agụ kpakpando, ọdịmma ndị enyi, ọnụ ọgụgụ foto, wdg, nakwa azịza ndị e nyere n'elu 2,600 ajụjụ na saịtị ahụ. Na akwụkwọ edemede nke na-eso data data ahụ wepụtara, ndị dere kwuru na "Ụfọdụ nwere ike ịjụ ụkpụrụ omume nke ikpokọta ma wepụ data a. Otú ọ dị, ihe niile achọtara na dataset bụ ma ọ bụ na ọ dịlarị n'ihu ọha, yabụ ịtọhapụ dataset a na-enye ya ya ka ọ bụrụ ihe bara uru karị. "
Na nzaghachi na ntọhapụ data ahụ, a jụrụ otu n'ime ndị edemede na Twitter: "Akụkụ dataset a bụ nke a ga-achọpụta. Ọbụna gụnyere aha njirimara? Ọ dị ọrụ ọ bụla e mere iji mee ka aha ya ghara ịdị? "Ihe ọ zara bụ" Ee e. Data adịworị n'ihu ọha. " (Zimmer 2016; Resnick 2016) .
Nyochaa usoro data a site na iji ụkpụrụ na ụkpụrụ omume kwadoro na isi nke a.
Ị ga-eji data ndị a maka nyocha nke onwe gị?
G in i ma ob ur u na i kpochara onwe gi?
[ N'afọ 2010, onye na-enyocha ihe ọmụma na US Army nyere 250,000 nsụgharị diplomamatic na nzukọ WikiLeaks, na e mesịrị ha online. Gill and Spirling (2015) arụ ụka na "nkwupụta Wikileaks nwere ike na-anọchite anya ihe nchịkọta data nke a pụrụ ịkụnye iji nwalee echiche aghụghọ na mmekọrịta mba ụwa" ma jirizie ọnụ ọgụgụ tụnyere ihe atụ nke akwụkwọ ndị a na-ede. Dịka ọmụmaatụ, ndị edemede na-ekwu na ha na-anọchite anya ihe dịka pasent 5 nke ihe niile diplomatic câbles n'oge ahụ, ma na nke a dịgasị iche iche site na ụlọ ọrụ nnọchiteanya na ụlọ ọrụ nnọchiteanya (lee Foto nke 1).
Gua akwukwo ahu, ma dee ederede ihe gbasara ya.
Ndi edeputara adighi inyocha ihe omuma nke akwukwo ndi ozo. Enwere ọrụ ọ bụla iji eriri ndị a ị ga-eme? Enwere ọrụ ọ bụla iji eriri ndị a ị gaghị eme?
[ ] Iji nyochaa otú ụlọ ọrụ si azaghachi na mkpesa, otu onye nchọpụta zipụrụ akwụkwọ ozi mkpesa na 240 ụlọ oriri dị elu na New York City. Nke a bụ ihe si na akwụkwọ ozi na-ezighị ezi.
"Ana m edetara gị akwụkwọ ozi a n'ihi na enwere m oke iwe banyere ahụmahụ m nwere n'oge na-adịbeghị anya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ gị. N'oge na-adịbeghị anya, mụ na nwunye m mere ememme ncheta mbụ anyị. ... N'uhuruchi ahụ bịara cheta mgbe mgbaàmà ahụ malitere ịpụta ihe dị ka awa anọ mgbe o risịrị nri. Ogba aghara, vomiting, afọ ọsịsa, na abdominal cramps niile na-ezo aka otu ihe: nri nsị. Ọ na-eme ka m na-ewe oké iwe na-eche na oge mgbanyasị pụrụ iche anyị mere ka m belata na nwunye m na-ele m ka m na-eleba anya na ọnọdụ nke nwa ebu n'afọ na ụlọ mposi nke ime ụlọ ịsa ahụ n'etiti n'agbata mgbakọ. ... Ọ bụ ezie na ọ bụghị nzube m ịkọ akụkọ ọ bụla na Business Better Business ma ọ bụ Ngalaba Ahụike, Achọrọ m gị, [aha onye nchịkọtaghachi], iji ghọta ihe m gara n'ihu na ị ga-azaghachi ya. "
Nyochaa ọmụmụ ihe a site na iji ụkpụrụ na ụkpụrụ omume akọwapụtara na isi nke a. Nyere ntule gị, ị ga-eme ọmụmụ ihe ahụ?
Nke a bụ otú ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị natara akwụkwọ ozi ahụ si meghachi omume (Kifner 2001) : "Ọ bụ ọgba aghara dị ka ndị nwe, ndị isi na ndị isi na-enyocha kọmputa maka aha [aha e degharịrị] ndetu ma ọ bụ kaadị krisịl, nyochaa menu ma wepụta ngwaahịa maka ihe oriri, ndị na-arụ ọrụ na kichin na-arụ ọrụ banyere ihe ga-ekwe omume, ihe niile nke mahadum na prọfesọ na-enweta ugbu a bụ ụlọ akwụkwọ azụmahịa si hell. "Ihe ọmụma a ọ gbanwere otú ị si enyocha ọmụmụ ahụ?
Dị ka m maara, IRB ma ọ bụ ndị ọzọ ọ bụla anaghị enyocha ya. Nke ahụ ọ na-agbanwe otú ị si enyocha ọmụmụ ihe ahụ? Ntak-a ma ọ bụ ihe kpatara ya?
[ N'inwe ajụjụ na ajụjụ gara aga, m ga-achọ ka ị jiri ọmụmụ a tụnyere nchọpụta dị iche iche nke gụnyere ụlọ oriri na ọṅụṅụ. N'ime ọmụmụ ihe ndị a, Neumark na ndị ọrụ ibe (1996) zitere ụmụ akwụkwọ abụọ na ụmụ akwụkwọ nwanyị abụọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ maka ndị ọrụ na-echere na ụlọ iri nri 65 na Philadelphia, iji nyochaa ịkpa ókè nwoke na nwanyị na ụlọ ọrụ ụlọ ahịa. Ihe iri na atọ ahụ mere ka a gbaa mmadụ ọnụ ahịa 54 na ọrụ 39. Ihe omumu a bu ihe omuma nke ndi mmadu na-eri nri n'ulo ahia.
Dee ihe odide gbasara iwu maka ọmụmụ ihe a.
Ị chere na ọmụmụ ihe a dị iche na nke a kọwara na ajụjụ gara aga. Edieke edide ntre, didie?
[ , ] N'ihe dị ka 2010, ndị ọkachamara 6,548 na United States natara ozi ịntanetị yiri nke a.
"Ezigbo Prọfesọ Salganik,
M na-edetara gị akwụkwọ n'ihi na m bụ onye chọrọ Ph.D. nwa akwukwo nke nwere oke mmasị na nyocha gi. Nzube m bụ ime ka Ph.D. mmemme nke ọdịda a na-abịa, ọ na-agụkwa m agụụ ịmụta ihe niile m nwere ike banyere ohere nyocha na ugbu a.
M ga-anọ na ụlọ akwụkwọ taa, ọ bụ ezie na m maara na ọ bụ obere oge, m na-eche ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnwe minit 10 mgbe ị ga-adị njikere iso m ka m kwuo obere oge maka ọrụ gị na ohere ọ bụla m nwere ike itinye na ya nyocha gị. Oge ọ bụla ga-adịrị gị mma ga-adị mma n'ebe m nọ, ebe ị na-ezute gị bụ ihe kacha mkpa m n'oge nleta ụlọ akwụkwọ a.
Ana m ekele gị n'ọdịnihu maka ntụgharị uche gị.
N'ụzọ dị nro, Carlos Lopez "
Ozi imel ndị a adịgboroja; ha bụ akụkụ nke nyocha nke ubi iji chọpụta ma ndị ọkachamara ga-azaghachi na email ahụ dabere na (1) oge oge (taa na izu ọzọ) na (2) aha onye na-eziga, nke dị iche iche iji gosi agbụrụ na okike (Carlos Lopez, Meredith Roberts, Raj Singh, wdg). Ndị nchọpụta ahụ chọpụtara na mgbe a na-arịọ arịrịọ n'ime izu ole na ole, a na-enye ndị isi Caucasian ohere ka ha nweta ihe dị ka pasent 25% karịa ụmụ nwanyị na ụmụ obere. Ma mgbe ụmụ akwụkwọ ahụ na-eme ihe ngosi chọrọ nzukọ n'otu ụbọchị ahụ, a kpochapụrụ ụkpụrụ ndị a (Milkman, Akinola, and Chugh 2012) .
Nyochaa nnwale a dịka ụkpụrụ na ụkpụrụ omume dị na isi nke a.
Mgbe ọmụmụ ihe ahụ gasịrị, ndị nchọpụta zigara ndị niile so na ya ozi email ndị a.
"Na nso nso a, ị nwetara akwụkwọ ozi email site na nwa akwụkwọ na-arịọ maka minit 10 nke oge gị iji kwurịta gbasara Ph.D gị. mmemme (ahụ email ahụ na-egosi n'okpuru). Anyị na-eziga gị taa ka ị ghara ikwu okwu n'ebumnuche nke email ahụ, ebe ọ bụ akụkụ nke nchọpụta nchọpụta. Anyị na-atụ anya na ọmụmụ ihe anyị emeghị ka ị daa mbà ma rịọ mgbaghara ma ọ bụrụ na ị nọ na-enwe nsogbu ọ bụla. Olileanya anyị bụ na akwụkwọ ozi a ga-akọwa nkọwa na nzube nke ọmụmụ anyị iji belata nchegbu ọ bụla i nwere ike inwe banyere itinye aka gị. Anyị chọrọ ikele gị maka oge gị na maka ịgụ ihe ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịghọta ihe mere ị natara ozi a. Anyị na-atụ anya na ị ga-ahụ uru nke ihe ọmụma anyị na-atụ anya ịmalite iji ọmụmụ ihe omumu a buru ibu. "
Mgbe ha kọwachara ebum n'uche na ọmụmụ ihe ahụ, ha kwukwara na:
"Ozugbo ihe nchọpụta anyị dị, anyị ga-eziga ha na ebe nrụọrụ weebụ anyị. Biko jide n'aka na enweghi ike ịkọwa data ọ bụla site n'ọmụmụ ihe a, anyị ga-enwe ike ịchọpụta nzaghachi email na nchịkọta-ọbụghị na ọkwa nke ọ bụla. Enweghị onye ọ bụla ma ọ bụ mahadum ga-egosipụta na nke ọ bụla n'ime nnyocha ma ọ bụ data anyị na-ebipụta. N'ezie, nzaghachi ọ bụla nke onye ọ bụla anaghị aba uru n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe mere onye otu onye otu ọkachamara nwere ike ịnakwere ma ọ bụ jụ arịrịọ. Enweelarị amaala data ọ bụla na a ga-ehichapụ ozi nzaghachị nwere ike ịchọta site na ọdụ data anyị na ihe nkesa yiri ya. Na mgbakwunye, n'oge a na-amata data ahụ, echedo ya na okwuntughe siri ike ma dị nchebe. Dịka ọ na-adị mgbe ọ bụla ndị nkụzi na-eme nnyocha gbasara ụmụ mmadụ, usoro akwụkwọ nyocha anyị na ụlọ ọrụ mahadum kwadoro anyị na-akwado anyị (ụlọ ọrụ mahadum Columbia University Morningside IRB na University of Pennsylvania IRB).
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla banyere ikike gị dị ka isiokwu nyocha, ị nwere ike ịkpọtụrụ Board nke Ụlọ Ọrụ Columbia University Morningside Institutional Review Board na [redacted] ma ọ bụ site na email na [redacted] na / ma ọ bụ University of Pennsylvania Institutional Review Board na [gbanwee].
Ana m ekele gị maka oge na nghọta gị banyere ọrụ anyị na-arụ. "
Kedu ihe arụmụka maka arụmụka na ikpe a? Gịnị bụ arụmụka megide? Ị chere na ndị nchọpụta ahụ kwesịrị ịkọwa ndị so na ya ikpe n'okwu a?
Na ihe ndị na-akwado weebụ, ndị na-eme nchọpụta nwere akụkụ nke isiokwu ya bụ "Iwu Ndị Mmadụ Na-echebe." Gụọ mpaghara a. Enwere ihe ọ bụla ị ga-agbakwunye ma ọ bụ wepu?
Kedu ụgwọ nke nnwale a mere ndị nchọpụta ahụ? Kedu ụgwọ nke nnwale a maka ndị na-eso ụzọ? Andrew Gelman (2010) ekwuola na ndị na-amụ ihe a ga-akwụ ụgwọ maka oge ha gachara. Ị kwenyere? Gbalịa mee ka arụmụka gị jiri ụkpụrụ na ụkpụrụ omume dị na isi nke a.